Fivondronamben’ny eveka: “Manentana ny rehetra hifidy malalaka” | NewsMada
Fivondronamben’ny eveka: “Manentana ny rehetra hifidy malalaka”
“Efa fantatsika fa adidin’ny olom-pirenena tsirairay ny mifidy. Koa mbola manentana ny rehetra izay afa-manao izany mba handray anjara mavitrika amin’ny fihodinana faharoa, ary hanao safidy malalaka tokoa araka ny feon’ny fieritreretana.”
Izay ny hafatry ny birao maharitry ny Fivondronamben’ny eveka eo anivon’ny Ekar, afakomaly, manoloana ny fiatrehan’ny vahoaka malagasy ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa, rahampitso.
Miantso ny tompondraikitra isan-tsokajiny nomena fahefana hikarakara ny fifidianana amin’ny ambaratonga rehetra hanao izay tratran’ny ainy izy ireo. Mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara amin’ny fikarakarana ny voka-pifidianana hisehoan’ny tena safidin’ny vahoaka izany. Izay no antoka lehibe hanafoana ny ahiahy tsy ihavanana sy hahamarim-pototra ny fifidianana, ka hitondra filaminana aorian’ny famoahana ny vokatra ofisialy.
Mila mifanaja ireo mpifaninana sy ny mpomba azy
“Miantso anareo mpifaninana amin’izao fifidianana izao sy ireo mpomba azy izahay mba hampanjaka ny fihavanana sy ny fifanajana ary ho tony sy hilaminana eo am-panatanterahana ny fifidianana”, hoy ny hafatra. Indrindra eo am-piandrasana ny famoahana ny voka-pifidianana, hahay handray amim-panetren-tena ny tena safidin’ny vahoaka. Miara-miaiky ny rehetra fa tsy hitondra tombontsoa ho an’ny firenena sy ny vahoaka na oviana na oviana ny korontana, fa vao mainka aza hampiditra ny rehetra any amin’ny kizo mangitsokitsoka ary tsy mendrika an’izany ny vahoaka malagasy.
Na iza na iza ho voafidy eo, izy no filohan’ny vahoaka malagasy tsy ankavanaka. Koa aoka hijoro ho mpampihavana sy mpampiombona, hahay hiara-kiasa amin’ny hery velona rehetra sy izay tsara sitrapo te hampandroso ny firenena.
Samy nilokaloka fa hampandroso marina ny firenena ireo kandidà tamin’ny fampielezan-kevitra. Koa aoka mba hanaja ny teny nomeny izay filoha ho voafidy eo, ary tsy hikendry afa-tsy ny soa iombonana sy ny fampandrosoana ny firenena amin’ny lafiny rehetra hahazoan’ny vahoaka tsivakivolo ho velona sy hiadam-pinaritra.